समाजसेवामा समर्पित सरिता – Tesro Ankha
समाजसेवामा समर्पित सरिता
782 पटक पढिएको
सेवाको भावनाबाट प्रेरित भइयो भने कसैले रोक्न सक्दैन । हो, समाजसेवाको भावनाबाट ओतप्रोत भएकै कारण सरिता गुरुङ अहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत समाजसेवामा सक्रिय छिन् । गरिब, दुःखी, असहायको सेवा नै मानवीय धर्म हो भन्ने मूलमन्त्र आत्मसात् गर्दै सरिताले सामाजिक सेवालाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्दै आएकी छन् ।
सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट सरिताले कहिले सेती बाढीपीडितको सेवामा खटिइन् त कहिले मिर्गौला बिरामीका लागि । कास्कीको ढिकुरपोखरी–६ पाउँदुरकोटमा जन्मिएकी सरिता केही समयअघि अमेरिका पुगेकी छन् । बाबा खड्कबहादुर र आमा मैतकुमारी तमूको कोखबाट २०४३ मा जन्मिएकी सरिताको प्राथमिक शिक्षा पाउँदुरमै भयो । धारापानी माविबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेकी सरिताले पद्मकन्या क्याम्पसमा पढिन् ।
आमाबाट प्रेरित भएर ०६१ देखि सामाजिक सेवामा लागेकी सरिताले दुःखमा परेका सबैलाई सहयोग गर्न चाहन्छिन् । फेसबुकको माध्यमबाट उनले कास्की भाचोक मकैखोलाकी २० वर्षीय मिर्गौला बिरामीका लागि १० लाख रुपैयाँ जुटाइन् । त्यस्तै दुई वर्षीया अनुजाका लागि साढे पाँच लाख रुपैयाँ फेसबुकबाटै उनले संकलन गरिन् ।
उनका लागि फेसबुक अभियानले निकै साथ पाइन् । उनले सेती बाढीपीडितका लागि तीन लाख रुपैयाँ संकलन गरेर पीडितसमक्ष पुर्याइन् । त्यस्तै पर्वतका टाउकोसम्बन्धी रोगबाट ग्रसित कमल क्षेत्रीलाई ३४ हजार रुपैयाँ संकलन गरिदिइन् । त्यसो त उनले चितवन विशालनगर–१० चौतारीमा बस्ने ७५ वर्षका वृद्ध दम्पतीलाई ९२ हजार रुपैयाँ नगद सहयोग गरिन् । रक्तक्यान्सर पीडित पाँच वर्षीय रितिज श्रेष्ठलाई तीन लाख ३७ हजार रुपैयाँ दिइन् । त्यस्तै दसैँ दक्षिणा संकलन गरेर ४५ हजार रुपैयाँ बालबच्चा पालन गर्ने स्थानमा सहयोग गरिन् ।
त्यसो त उनी समाजसेवाक्रममा गरिबीको चपेटामा परेको समाचार सार्वजनिक भएपछि दोलखाको आलम्पु गाविस पुगिन् । उनले आलम्पुमा पुगेर ८४ वर्षीया बुद्धिमाया थामी, ८१ वर्षीय मानबहादुर थामीलाई १७ हजार रुपैयाँ सहयोग गरिन् । जाडोमा लगाउने लुगा, ओढ्ने न्यानो कपडा नपाएका थामीलाई उनले डसना र सिरक बाँडिन् ।
त्यस्तै, उनले डा. चित्रबहादुर वाग्लेको उपचारका लागि १५ हजार रुपैयाँ सहयोग गरिन् । ३७ अशक्त बच्चाका लागि उनले एक लाख ५० हजार रुपैयाँ दसँैताका उपलब्ध गराइन् । अनुहारमा ट्युमर भएका हेमराज गुरुङका लागि सहयोग जुटाइन् ।
गरिबी, दुःखीको फोटो र हृदयविदारक सन्देश फेसबुकमा राख्छिन् । सोही सन्देश र फोटो हेरेपछि विदेशमा बस्ने सहृदयी दाजुभाइ, दिदीबहिनीले सहयोग गर्छन् । विदेशमा रहने सहृदयीले पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म सहयोग प्राप्त भएको छ– सरिताको अभियानमा । युवापुस्तालाई सामाजिक सेवाप्रति आकर्षित गर्न आफू सक्रियतासाथ यो अभियानमा हिँडेको उनले बताइन् । भनिन्, ‘स्वर्ग त देखेको छैन, यसरी सहयोग गर्न पाउँदा आनन्द लाग्छ ।’
२०७४ चैत्र ६ २१:०३
ढुंगाखानी खुल्दा गाउँठाउँमै रोजगारी
एउटै खुकुरीको १ लाख
भैँसीलाई भत्ता !
खोटाङमा वाम गठबन्धनको विशाल भट्टराई, राजन राई र रामकुमार राई विजयी